नेपालको एकीकरण भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले- ‘यो देश ४ जात ३६ वर्णको फूलबारी हो’ भनेका थिए । विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी तथा धर्मावलम्बीहरूको संयुक्तताले बनेको यो देश, देश बन्दा सजिलै बनेको थिएन । धेरै युद्धहरू भएका थिए र जनविनाश भएको थियो । धेरैको रगत बगेको थियो ।
हार्नेहरूले पनि ठूलो मिहिनेत गरेर हारेका थिए र जित्नेहरूले पनि सजिलै जितेका थिएनन् । जीतको उन्मादमा कीर्तिपुरेका नाक-कानसमेत काट्न पुगेका थिए गोर्खाली सेना भन्ने कथन प्रचलित छ । अर्थात् यो देश बन्दा सजिलै बनेको थिएन । देश बन्दा देशहरू भत्किएका थिए । एउटा ठूलो देश बन्न सानासाना थुप्रै देशहरू भत्किनुपर्छ अनि मात्र देश बन्छ ।
अढाई सय वर्षको एउटा छोटो इतिहासलाई खोकिलामा चेपेर हिँडिरहेका छौँ हामी । हजारौँ वर्षअघिका कस्ता अचम्मका रहरलाग्दा कुराहरू हाम्रै देशको परिसरभित्र फोसिल्स भएर रहेका छन् । छोटै इतिहासलाई छोटै अहंहरूले उभ्याएर गीत गाइरहेका हामीले तर आफूलाई लामो यात्राको जाति मान्ने हो भने धेरै अघिसम्मका कुरा बुझिरहनु राम्रो हुन्छ ।
संसारको कथा भनेकै विगतको स्मरण हो । लेख्य वा अलेख्य रूपमा मानव सभ्यताले हिँडेको यात्रा कथाकै पछिल्लो डिक हौँ हामी । युगले हामीसम्म आइपुगेर एउटा विन्दु टेकेको छ तर यो उभिएरै हामीलाई छुँदै अघि गइसक्यो किनभने छोरीले नातिनी पाइसकिन्, बुहारीले नातिलाई तेल घस्न थालिन् ।
पुस्ता प्रतिपुस्ता सर्दै जान्छ समय, आगतको आँगनतिर र कति कुराहरू विगतका विस्मृतिमा पर्दै जान्छन् । कति किम्वदन्ती बन्दै जान्छन् । कति लोककथा र आख्यानमा परिणत हुन्छन् । प्रमाणहरूको अभावमा, दर्शकको अनुपस्थितिमा सत्य पनि कथा जस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन तर तिनीहरूले छाडेको चिनो हामीलाई आफू आएको विगत पाइलाको झल्को जहिले पनि हुन्छ ।
इतिहास जति पुरानो हुन्छ, त्यो त्यति नै कथा हुन्छ । कालक्रमको नजिकको घटना विवरण जति रुचिकर र तथ्यात्मक लाग्छ, लामो विगत एउटा रमाइलो काल्पनिकताले सिँगारिएको विपठन हुन्छ । लेखकहरू जे लेखे पनि विगतलाई लेख्छन्, आगतलाई सम्बोधन गर्दै । विगतलाई पढेर आगतमाथि पाइला टेक्नुपर्ने बाध्यता त सधैँकै छ नै तर सुदूर विगतले दिने कथा निकट विगतको भन्दा धेरै नै कलात्मक र आकर्षक लाग्छ ।
वर्तमान प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो अहं हो । ‘म छु’, ‘म हुँ’को अहंमले बाँचिरहेको हुन्छ प्रत्येक मान्छे । यस बँचाइमा उभिएर उसले देख्ने र बुझ्ने विगत एउटा असफल र अपूर्णकालको बिम्ब मात्र अनुभूत हुन्छ उसलाई ।
आजभन्दा नबुझेकै, नदेखेकै भएर बितेको हो त्यो । त्यो किन पनि कमजोर छ भने त्यो हिजो हो, जसले आजको दिन देख्नै पाएन । आज झुल्किएको घाम, आज बगिरहेको हावा, आज उडिरहेको चरा, आज खनिएको बाटो वा आज गरिएको शिलान्यास हिजो थिएन त्यसैले ।
हामीले जे कुरामाथि गर्व गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो त्यही पुरानोमाथि नै गर्छौं । को कति पुरानोदेखिको हो, कसको कति लामो कथा छ ? त्यो प्रत्येकको अहं हो । देश, जाति, संस्कृति, धर्म, परम्परा, कुल-गोत्र आदि सबैले आफ्नो पुरातन अवधिद्वारा अरूमाथि शासन गर्न खोज्छ ।
पुुरानो हुनुमा ठूलो मूल्य अडेको छ । धेरै पुरानो नोट, हुलाक टिकट, चिम्पान्जीको हड्डी वा राजमुकुट जेसुकै होस्, त्यसले मानव मस्तिष्कमा शासन गरिरहेको हुन्छ । मान्छेले गर्वका साथ जब आफ्नो पुस्ता गत्र थाल्छ, उसले वर्तमानमाथि शासन गर्न खोजेकै हुन्छ ।
संसारमा पुरानोको खोजीले नै नयाँहरू सम्पन्न भएका छन् । तर, हाम्रो देशमा पुरानो खोज र अनुसन्धानको काम भनेजस्तो गरी हुनै सकेको छैन । पुरानोको पुरातन मान्यता दिन सक्ने अध्ययनका इकाई चेतको अभावले पनि हामी कुनै ढुंगोको आयु पत्ता लगाउन असमर्थ छौँ ।
मानव सभ्यतालाई थाहा पाउन त झन् कति कठिन छ, जो सदा गतिशील र प्रवाहमय छ नै । हाम्रा विद्वानहरू यस क्षेत्रमा नलागेका होइनन् तर धेरै नै पुराना कुराहरूलाई प्रमाण दिने काममा असफल भइरहेकै पनि छन् । काल्पनिक पृष्ठभूमिहरूको निर्माण गरेर आध्यात्मिक उचाइ थाप्दै तीर्थ बनाइदिन जति सजिलो छ, विज्ञान र विधिले मागेको प्रमाण दिन त्यति सजिलो छैन ।
हाम्रो देशमा मान्छेभन्दा छिटो र सजिलो गरी भगवान जन्मिन्छन् । कुनै पनि विकृत वा अनौठो वस्तुमा भगवानको अंश दृष्टिगोचर भइहाल्छ । भगवानले तर्क र प्रश्नहरूलाई तत्काल थिचिदिएर भक्तिचेतको स्थापना गरिदिएपछि प्रत्येक अनुसन्धानका मार्गहरू लोप भएर जान्छन् । मुक्तिनाथमा किन सदा आगो बलिरहन्छ वा सतासीधामको पानीमा किन वीरेनुनको गन्ध आउँछ ? यी प्रश्नहरू भगवान स्थापना हुनासाथ लोप हुन्छन् । भगवान र गरिबीले साह्रै दुःख दिएको छ- हामी नेपालीलाई । हामीलाई गरिब भइरहन, गरिबीको गीत गाइरहन र भक्तका रूपमा दासताको भजन गाइरहनु सधैँ राम्रो लाग्छ, लागिरहन्छौँ त्यतै ।
यति धेरै कुरा भन्न मन लागेको हो ‘प्रसङ्गवस’ पढेपछि । प्रसङ्गवस प्रसङ्गहरू प्रशस्त उठाइएका छन् । लेखनले पनि प्रसङ्ग मात्र कोट्याइएको छ । प्रसङ्ग भनेको एक बसाइ वा सन्दर्भमा त्यसबारे छ्वास्स केही कुरा उठाउनु र अरूको विचारलाई त्यतातिर खिच्नु मात्र हो ।
शीतल गिरीले यस्तो कथा बुनेर प्रसङ्ग उठाइदिएका छन्, त्यसपछि श्रोता वा पाठक बडा जिज्ञासु भएर ‘त्यसपछि’ भन्दै अरू कुराहरू जान्न वा सुन्न चाहन्छ । कथा हाल्ने सीपले शीतल गिरीलाई ‘हजुरआमा’ जस्तो बनाएको छ । हजुरआमाहरूले नाति-नातिनाहरूलाई भेला गरेर जसरी कथा हाल्ने गर्थे अघिअघि ।
निबन्धको सङ्ग्रह रहेछ, पाना पल्टाएर पढ्न थालेपछि मेरो अनुमान छेउछाउ नै पुगेन । भित्र त शीर्षकहरू अचम्म ढंगले उभिँदै आए- अशोकबाटिका, आमीर, गोपाल, चित्लाङ, जनकवंशी राजाहरू, डोय राज्य, तथागतको आगमन, धर्मयात्रा, भिक्षुबास, भेडापाल, मूर्तिया, रनिबास, राजदेवी, रुद्रसिंहको मुक्ति, रौतहट आदि । यी शीर्षकहरू सबैले नै प्राचीन इतिहासको उत्खनन गर्न खोजेका छन् ।
नेपाल भन्ने देश बन्नुभन्दा धेरै अघि यस भूमिमा बितेको समय र अभिलेखहरूको अध्ययन र खोजी गर्न प्रयत्न गरिएको रहेछ । पढ्दै जाँदा धेरै नै पुरानो समयमा पाठकलाई पुर्‍याउने कला नै मलाई सबैभन्दा मनपर्‍यो ।
यी लेखहरूमा उठाइएका चर्चा र प्रसङ्गहरू नितान्त नयाँ, यसै पुस्तकमा पहिलोपल्ट उठेका होइनन् तर यिनलाई बुझाउन र पढ्न जुन आख्यानको रचना गरिएको छ, त्यो बढी रोचक र पठनीय छ । प्रश्नहरूलाई प्रशस्त ठाउँ राखिएको छ । ठीक के हो, के होइन ? माथि पाठकीय जिज्ञासा जुरुक्क उठ्छ । त्यो उठेकै राम्रो ।
खोजी र अनुसन्धानको काम एउटाले मात्र गर्ने वा पूर्ण हुने कुरै होइन भने एउटै लेखकले सबैतिरबाट छेउकुना बाँधेर त्यसलाई किनारा लगाइदिन सम्भव पनि छैन । सबैको सहकार्यले हामी इतिहासको नजिकसम्म पुग्न सकौँला । त्यसै भएरै यस पुस्तकको शीर्षक राखिएको हुनुपर्छ- ‘प्रसङ्गवस ।’
प्रसङ्गवस कुरा चलेको मात्र हो, टुंग्याइएको होइन, यसलाई अझ विस्तृत ढंगले अध्ययन गर्न आवश्यक छ भन्ने सङ्केत हो ।
प्रथम पृष्ठमा ‘अशोकबाटिका’ शीर्षकमा आँखा परे । यो त बुद्धकालीन विषय हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । पढ्दै जाँदा कथाले चन्द्रगुप्त मौर्यसँग भेट गरायो । धेरै वर्षअघि एउटा ‘आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य’ भन्ने पुस्तक पढेको थिएँ र त्यसबाट मैले चन्द्रगुप्तलाई चिनेको थिएँ । तिनै चन्द्रगुप्तको चर्चा यहाँ देखेर एकक्षण अडिएँ र सोचेँ, धेरै कालअघि पो पुग्न लागेँ कि के हो ?
नभन्दै पढ्दै जाँदा एकदम नै रमाइलो ढंगले प्राचीन नेपाली व्यापारको चर्चा रहेछ त्यहाँ । अर्थात् नेपालतिरबाट सामान बेच्न जाने त्यसबेलाका व्यापारीहरूको र वस्तुहरूको विशिष्ट चर्चा भेटियो । आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यले चन्द्रगुप्त मौर्यका लागि तयार गरिदिएको त्यसबेलाको संविधान मानिएको ‘कौटिल्यको अर्थशास्त्र’मा नेपाली सामानहरूको गुणवत्ता र विशिष्टतामाथि गरिएको मूल्याङ्कनलाई बडा गर्वका साथ शीतलजीले आख्यानात्मक ढंगले चर्चा गरेका रहेछन् । पढ्दा कुनै सुन्दर ऐतिहासिक कथा नै पढेको बोध हुन्छ । नेपाली सामानको स्तरीयताको चर्चा यस्तो रहेछ ।
- ‘हामी तपाईंलाई भेडाको मसिनो भुवा र खरायोको रौँबाट मात्र निर्मित राडी, पाखी, खास्टो, बख्खुहरू नजर गराउँछौँ । यी सामानहरूका बारेमा हामीले केही भन्नु भन्दा पनि एक दशक प्रयोग गरिसकेपछि पनि गुणमा रत्तिभर अन्तर नआउने भनी सम्राटको बुद्धिमान, विद्वान्, तार्किक, कुटनीतिज्ञ मन्त्री कौटिल्यले आफ्नो अर्थशास्त्रमा लेखेर नेपाल देशका राडी, पाखीको गौरव बढाइदिनुभएको छ ।’
यस लेखको गर्भासय विषय यही भेटियो । अर्थात् नेपाल भूमिमा त्यसबेला भेडापालहरूको बसोबास थियो र मुख्य उत्पादन नै ऊन थियो । यिनै भेडापालहरूका नामबाट नेपाल नाम रहन गएको अर्थात् उनीहरूलाई ‘ने’ भनिने र ऊनैऊनको देश भनी नेपाल नाम रहेको भन्ने कथन पनि छ ।
यसै विषयलाई अझ सत्य प्रमाणित गर्न खोज्दै ‘भेडापाल’ शीर्षकको अर्को छुट्टै लेखसमेत यसै सङ्ग्रहमा विराजमान भएको छ, जसले भेडापाल जातिको राम्रो चर्चा गरेको भेटिन्छ ।
त्यसैगरी आभीर जातिहरू को हुन् ? कहाँबाट आएका वा ती कसरी भएँ ? नेवार जाति कसरी बन्यो ? र, इतिहासमा उल्लेख गरिएका कतिपय प्रसङ्गहरूमाथि नै नयाँ खाले प्रश्नहरू उठाउँदै आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । शीतलको यो पक्ष निकै सशक्त छ । प्राचीन इतिहास अनुमानहरूको सङ्कलन पनि हो ।
धेरैजसो कुराहरू भेटिएका तथ्यहरूसँग जोडिएका अनुमान र कल्पनाहरूको सुन्दर प्रस्तुतिसमेत । त्यस मार्गमा उनको कलम पनि शक्तिशाली देखिन्छ ।
इतिहासले नेपालको पहिलो शासक गोपालवंशी हो भनिएकालाई अस्वीकार गर्दै तिनीहरूभन्दा अघि नेपालमा भेडापाल र माछामार जातिहरू थिए, गोपालवंशीहरूले पछि आएर तिनीहरूमाथि कब्जा जमाएको हो भन्ने ठोकुवा गर्दै भनिएको छ - ‘... यस उपत्यकामा गोपाल वंश नै प्रथम जाति हो भन्नु इतिहासलाई अपहेलना गर्नु हो ।’ अर्थात् इतिहासका विद्यार्थीहरूलाई एउटा ठूलै प्रश्न उभ्याइएको जस्तो लाग्यो यो भनाइ । चुप लागेर जसले जे भन्यो, त्यही पत्याएर अघि बढ्नेलाई बाटोमा एउटा ढिस्को उठाइदिएको देखेँ मैले ।
‘चित्लाङ’ शीर्षक यात्रा संस्मरण जस्तो हुँदाहुँदै फेरि प्राकइतिहासतिरै भासिन पुगेको भेटियो । सम्राट अशोक चैत्यहरू निर्माण गर्दै आई बास बसेको यस ठाउँको बडो सुन्दर वर्णन गरिएको छ । पढ्दापढ्दै रमाइलो लाग्ने प्रसङ्ग त सम्राट अशोककी सुपुत्री चारुमती र युवक देवपालको भेट तथा प्रेमको सन्दर्भ छ । पुरुष र स्त्रीबीच कहाँ, कहिले, किन, कसरी, कोसँग प्रेम बस्छ र जीवन बित्छ, यो सदा अनौठो रहस्यको विषय छ नै । कहाँबाट हिँडेकी राजयात्रामा राजाकी छोरी यसबीच बाटैमा कसैकी पत्नी भएर बसेकी र यात्राबाट अलग्गिएको कथा रमाइलो र मार्मिक लाग्यो । अर्थात् शीतल गिरीमा कथा बुन्ने क्षमता साह्रै सफल लाग्यो ।
कुनै कुरालाई तुरुन्तै कथा बनाउन सक्ने र पाठकलाई यथार्थबाट थाहै नदिई काल्पनिकतामा पुर्‍याउने क्षमता बेजोड हो गिरीको ।
सर्वसाधारण मानिस राजा जनक भन्नाले ‘सीता’का पिता र रामका ससुरा भन्ने बुझ्छन् तर जनक भनेको वंश परम्परा हो, त्यस वंशमा अनेकौँ राजाहरू भए र तिनका आआफ्नै विशेषताहरू थिए भन्दै त्यसकालका विद्वान् ऋषिमुनिहरूको र तिनीहरूसँग राजाहरूको सम्बन्धको चर्चा छ ।
सीताका पिताको नाम जनक नभई ‘शिरध्वज’ जनक हो भन्दै जनक परम्पराका अनेकौँ राजामध्ये ‘शिरध्वज’को मात्र सबैभन्दा बढी चर्चा रहेको बताइएको छ ।
जनकवंशी अन्तिम राजा ‘कराल जनक’ कामुक भई जनताका छोरी-बुहारीहरू समेतको अस्मिता लुट्न थालेपछि जनताले नै तिनको हत्या गरी सो वंशकै लोप गरिएको प्रसङ्ग छ । यो कुरा मलाई नयाँ लाग्यो वा मेरो ज्ञानमा नपसिसकेको पाएँ, रमाएँ ।
यस्तै, डोर राज्य, तथागतको आगमन, धर्मयात्रा, भिक्षुवास, भेडापाल, मूर्तिया आदि शीर्षकहरू सबैले हामीलाई प्राचीन नेपालका विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गराउँछन् भने फोसिल्स भइसकेका कति कुराहरूसँग भेट गराउँछन् । पढ्दा कहीँ दिक्क नलाग्ने र प्रत्येक निबन्धले कथा बताउने हुँदा यो सबै खाले पाठकलाई चित्त भर्ने कृति भयो कि भन्ने लाग्यो ।
प्राचीन इतिहासपट्टि गहिरो सूचना राख्ने शीतल गिरीलाई यस कृतिबाट एक जिज्ञासु र फरक मत राख्न साहस गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिन्न सकिने अनुमान गरेँ । राहुल साँकृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन, यशपाल आदिका थुप्रै हिन्दी पूरा ऐतिहासिक कृतिहरू पढ्दाको झल्को पाइरहेँ हरेक ठाउँमा ।
नेपालमा यस विषयलाई बडो रोचक ढंगबाट लेख्न सक्ने विद्वान् मदनमणी दीक्षित देखिनुहुन्थ्यो । उहाँका द्रौपदी र सीता, त्रिदेवी, माधवी, भूमिसुक्त आदि कृतिहरूले हामीलाई त्यस्तै पुरानो युगमा पुर्‍याउँछन् र वर्तमानबाट सम्बन्धै चुँडाउन खोज्छन् ।
पाठकलाई आन्दोलित गरेर छाडिदिने मात्र काम हो लेखकको । लेखकले टुंग्याउने, बिट मार्ने, समाधान गर्ने होइन, ती सबै काम पाठक (समाज)ले गर्ने हो ।
लेखकले प्रश्न गर्छ, चुप लागेर बसेको समाज झस्केर ब्युँझिन्छ र त्यसको उत्तर खोज्न थाल्छ । समाजलाई गतिशील बनाइरहन लेखक जहिले पनि प्रश्नार्थकको अवस्थामा रहिरहन्छ, रहनुपर्छ (?) । शीतलले त्यही गरेका छन् । कति रात त सपनामा कहिले तथागतसँग थिएँ, कहिले चारुमतीसित, कहिले चाणक्यसित थिएँ, कहिले भुक्तमानसित । पाठकीय दिमागलाई सक्रिय गर्न निकै सफल छ यो कृति, ‘प्रसङ्गवस ।’
तैपनि कति ठाउँमा पढ्दापढ्दै केही कुराहरू नमिलेका झैँ लाग्छन् । जस्तै :
(क) विषयले आख्यान समातेर बढ्दाबढ्दै आख्यानले खास बिसाउनी नै नभेटी, बीचैमा राम्ररी गीत बजिरहेको बेलामा बिजुली गएर रेडियो बन्द भएझैँ हुनपुग्छ वा टुंग्याउनीको बेलै नपुगी टुंगिन्छन् ।
(ख) कतैकतै अपत्यारिलो वर्णन र तथ्याङ्कहरू देखापर्छन् । पुराणका कृतिहरूमा पाइने अपत्यारिला जस्ता तथ्याङ्कहरू यसभित्र पनि छन् । जस्तै : तिब्बती धर्मस्वामीको सिमरौनगढ यात्रामा उनले त्यसबेला (इ.सं. १२२६) सिमरौनगडमा करिब ६ लाख घरहरू पाए । यो कथन लेखकको होइन, कतैबाट उद्धृत गरिएको हो तर कसरी पत्याउने ? ६ लाख घर हुन कति जनसंख्या चाहिएला ? आजभन्दा झण्डै नै सय वर्षअघि सिमरौनगढमा यत्रा घर थिए होलान् र ? (पाठकीय जिज्ञासा) ।
(ग) केही लेखहरूमा सन्दर्भहरू दोहोरिएका छन् । तिनीहरूलाई एउटै लेखमा समावेश गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि ! जस्तै : चित्लाङको धेरै प्रसङ्ग धर्मयात्रा शीर्षकमा करिबकरिब उस्तै भएर दोहोरिएको पाइन्छ । ती दुवै लेखलाई मिसाइदिएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो कि !
त्यसैगरी जनकवंशी राजाहरू शीर्षकको कराल जनकको चर्चा मूर्तियामा पनि दोहोरिएको छ । त्यसो त धेरै लेखहरूमा अघिल्ला पछिल्ला प्रसङ्ग मिल्दाजुल्दा हुँदै आएका हुन् । तर, तिनले पुस्तकको स्वरूपलाई भने खासै हानि पुर्‍याएका लाग्दैन ।
जे होस्, शीतल गिरीको अध्ययनको परिसरको विस्तृत अनुमान गर्न बाध्य पार्छ यस कृतिले । यो कृति पढेपछि उनको बौद्ध, हिन्दु, जैन, दर्शनहरू अध्ययन, प्राकइतिहासको अन्वेषण र खोजी तथा त्यसलाई बुझ्ने र बुझाउने शैलीको विकास बुझ्न सकिन्छ ।
सानो अध्ययनले र ठूलै मिहिनेतविना ‘प्रसङ्गवस’ कसरी यस्ता गहिरा कुराहरू गर्न सकिन्छ । समयले कहाँकहाँ छाडेर फालेको युगलाई उठाएर फेरि हाम्रो आँखामा पस्किने जुन काम भएको पाएँ, साह्रै खुसी लाग्यो । ज्ञानको क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहने पाठकका निम्ति यो एउटा ‘मखन’ हो, जसलाई गिरीले आफ्नो बौद्धिक तथा काल्पनिक मथिङ्गलमा मथेर निकालेका देखिन्छ ।
यसै त यस कृतिको विधा छुट्याउन सजिलो छैन । यो न कथा भन्नु, न त निबन्ध भन्नु । न यो शुद्ध इतिहास हो वा न त कल्पना मात्र । धेरै चिजहरू मिसिएको सत्य र भ्रमको सम्मिश्रण छ यसमा । यसलाई कतैतिरबाट लीला प्रस्तुति पनि पो भनौँ कि लाग्यो पढिसकेपछि ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २६, २०७७, १७:३०:००